Filename kordhiyo: .MTS
Xaqiiqada Fun ku saabsan MTS:
A file MTS heysta wax ka badan kaliya ee audio iyo video ka fiidiyo ah. Waxa kale oo ka mid ah subtitles iyo macluumaad navigation menu.
MTS (ama M2TS) waa extention file ah qaabka video digital qeexitaanka sare oo taariikhqorihii camera, sida AVCHD (Advanced Video codec High Qeexid) qaab. Qaab AVCHD ayaa waxaa si wadajir ah ee ay soo Sony & Panasonic oo soo bandhigay sanadkii 2006, oo inta badan loo isticmaalaa in kaamirada ay digital.
Waxaad ka heli doontaa waxa ay adag tahay in la ciyaaro files MTS on qalabka kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta si fiican u yaqaan ama waxa loogu badalo in ay qaabab kale si caadi ah loo isticmaalo-loo maqli karo. Akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Sida loo rogo ama MTS in QuickTime
Sida loo rogo ama MTS in 3GP
Waxaa laga yaabaa inaad xaq u doonayaan si ay u gudbiyaan files MTS ka fiidiyo si aad u computer u tafatirka,? Laakiin waxaa jira yimaado wax dhibaato ah. Haddii aad u samayn, waxaad ka heli doontaa dhammaan video tifaftirayaasha ma taageeri karaan qaab MTS. Waa hagaag, halkan waxaan ku bixiyaan xal qaar ka mid ah si ay u dajiyaan MTS in ay barnaamijyadooda, kuwaas oo si guul leh.
Beddelaan MTS Files
Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in lagu wareejiyo files MTS ka fiidiyo si aad u computer u ciyaaro ama tafatirka, sax? waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah Player cann't taageeraan qaab MTS iyo ku dhowaad dhammaan video tifaftirayaasha ma taageeri karaan qaab MTS. Waa hagaag, halkan waxaan ku bixiyaan xal qaar ka mid ah si loogu badalo MTS in ciyaareed ama tafatir.
Sida loo badalo mts in mp4
Sida loo badalo mts in avi
Sida loo badalo mts in MOV
Sida loo badalo mts in DVD
Sida loo badalo mts in wmv
Sida loo badalo mts in mpeg
Sida loo badalo mts in mkv
Sida loo badalo mts in mp4 on Mac / Win
Sida loo badalo mts in regelingen
Xaqiiqooyinka la jaan qaada files MTS
MTS waa mid ka mid ah qaabab in ay adag tahay in ciyaaro ama isticmaal si ballaaran. Liiska hoose wuxuu muujinayaa dhammaan codsiyada, websites iyo qalabka taageera qaab this.
Barnaamijyada in la furo files .MTS
Shabakadaha taageera files .MTS
Qalabka in la furo files .MTS